Imibandela yokuThengiswa kweeNkcazo ezivela kwiFXCC | I-Akhawunti ye-Forex kunye neemeko ze-Platform | Ukutshintshwa kwemali
Ikhaya / Trading / Akhawunti / Iimeko Trading
I-FXCC Iimpawu zoThengiso lweeShishini
Abathengisi be-forex abaphumelelayo badinga ukulungelelaniswa kwimeko yokuhweba. Iimeko zethu zokurhweba zizisa ukuthengiswa kwe-forex evulekileyo kwaye evulekile kubo bonke abanini beakhawunti kwaye banikezela ngokulandela inkcazo ekhethekileyo yokuthengisa. Itheyibhile engezantsi ichaza iinkalo eziphambili ze-akhawunti yethu ye-XL, e-Standard kunye ne-Advanced.
UkuKhutshwa kwamandla Unako ukuhlawula izikhundla zakho, kodwa qaphela ukuba ukulingana kweakhawunti yakho kufuneka ihlangabezane neemfuno zomda wokuba uvumele ukuvala enye okanye ngaphezulu kwezikhundla ezidibeneyo. Ama-akhawunti aHedged ngokupheleleyo awanakho ukukhusela kwi-Stop Out. Ukuba ukulingana kweakhawunti yakho kufinyelela kwizinga leZero okanye ngaphantsi kweso sizathu (ezifana nokusabalala ngokubanzi kwiindaba okanye ukutshintsha ukutsalwa), izikhundla zakho ezivulekile ziya kuvalwa ngokuzenzekelayo. I-FXCC inelungelo lokuvala zonke okanye inxalenye yezikhundla ezidibeneyo ukwenzela ukuphepha umngcipheko wokungabikho kwemali ngenxa yokusabalala ngokubanzi; Oku kungenza isicelo kwiAkhawunti ukugcina isixa esikhulu seendawo ezifihliweyo ngokulingana kakhulu.
Umgangatho osisiseko wokuThengiswa 0.01 uLote 0.01 uLote 0.01 uLote Ubungakanani obuncinci bokuhambisa amandla kunye nee-indices ngama-0.1 amaqashiso
Ukuqhuba iDax Zonke iintengiso zenziwa kwiimarike ze-Inter-bhanki zisebenzisa i-STP (i-Straight-Through-Processing)
Ukurhweba ngokuzenzekelayo Unokufaka isicelo sesicwangciso sakho sokuthengisa usebenzisa naluphi na umcebisi weNgcaciso kwi-MT4
Umgangatho weeNkalo zoLwazi 100% 100% 100% Xa i-akhawunti yakho ifinyelela kwiNqanaba leMargin ye-100%, uya kukwaziswa
Yekisa iNqanaba 50% 50% 50% Nje ukuba iakhawunti yakho ifikelele kwinqanaba leeMganeko ezilingana neNqanaba lokuPhela okanye ngezantsi, inkqubo iya kuvala ngokuzenzekelayo zonke iindawo zakho ezivulekileyo. Kufuneka iqatshelwe into yokuba nangaliphi na ixesha singalonyusa inqanaba lokuMisa, njengoko FXCC ibona kufanelekile.
Platform Trading MetaTrader4 MetaTrader4 MetaTrader4 I-FXCC iMeta Trader 4 & FXCC UkuThengiswa kweSelula
Izixhobo zeMali Iibhanki ezingama-28 zeGolide, kunye neSilivere, Jonga uluhlu olupheleleyo Iibhanki ezingama-28 zeGolide, kunye neSilivere, Jonga uluhlu olupheleleyo I-200 + zeeMpahla zeMali, Jonga uluhlu olupheleleyo Nceda uqhagamshelane neqela lethu loxhaswa ngolwazi olongezelelweyo.
Iimali zeeDleko I-USD, i-EUR kunye ne-GBP I-USD, i-EUR kunye ne-GBP I-USD, i-EUR kunye ne-GBP Iingxowa-mali unokuyibiza nge-akhawunti yakho
IziQulelo kwakhona Akukho Dekthi yokuThetha i-No Qu-Quotes
Ifomati yentengo Ixabiso lokugqibela le-5 Ixabiso lokugqibela le-5 Ixabiso lokugqibela le-5 Umzekelo: 0.12345
Amanqanaba okuma 0.1 Pip 0.1 Pip 0.1 Pip I-0.1 Pip kude neNqanaba leMarike, okt Unokubeka i-Stop Loss order ngaphakathi kokusabalala.
Amaxabiso aphezulu kunye aphantsi Ixabiso leBhidi Ixabiso leBhidi Ixabiso leBhidi Amaxabiso aPhakamileyo kunye neZantsi kwiTshathi kunye nokuBukela kweNtengiso zihlala ziziXabiso zeBhidi. Ke ngoko, xa ubambe indawo yokuThengisa i-Stop Loss yakho inokwenziwa kwiRhafu ephezulu kunereyithi ephezulu erekhodiweyo kwi-MT4 Market Watch okanye itshathi.
IComposit 100 USD 10,000 USD 100,000 USD Okanye imali elinganayo kwimali eyahlukileyo
U ku rhoxiswa 50 USD 50 USD 50 USD Kuzo zonke iItroniki
oluxhathisayo 1: 1 - 1: 300 1: 1 - 1: 200 1: 1 - 1: 100 - Inzuzo yeGadi neSiliva ngu-1: 100 kuwo onke ama-akhawunti.
Kho mishoni * UNOTHI FX: 0.75 pip icala
Iimpawu: i-$ 7.5 icala FX: 0.4 pip icala
Amanzi. Amandla kunye nama-Indices: $ 4 icala Nceda uqaphele ukuba kubaxhasi abaqaliswe yiqela le-3rd, imali yokuqalisa ingasebenza kwiAkhawunti ze-XL. Ukuba loo ntlawulo isetyenziswe, umthengi uya kwaziswa ngeFXCC ngaphambi kokuvumela nayiphi na imisebenzi yokuhweba kule akhawunti.
Qengqela ngaphaya Nceda ubhalele kwi Ikhasi le-Rollover Ezinye iinkcukacha.
imigaqo nemiqathango iyasebenza
IiFXCC Iiyure zoRhwebo lweeNkcazo
Ixesha lethu lokusebenza kwansuku zonke lokuthengisa kwi-17: 05 kwi-16: I55 iNew York Time (EST) ukususela ngeCawa ukuya kuLwesihlanu elilingana ne-00: 05 ku-23: IsiXhobo se-55 Isikhathi, ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu, ngaphandle kwe-25th kaDisemba kunye ne-1st kaJanuwari. Ngexesha loKhanya kweSuku loKhanya ukusebenza kwethu kunye nexesha leseva lihlengahlengiswa ngokwexesha leNew York (EST).